Shirkadaha Mashiinka Mashiinka Mashiinka Mashiinka Mashiinka Mashiinka Mashiinka leh ee FFP3
Haddii ay tahay SARS ama coronavirus pneumonia, dharka ilaalinta caafimaadku waxay door muhiim ah ka ciyaaraysaa faafitaanka fayraska oo dhan, iyo tayada dharka kahortaga caafimaad ayaa si tartiib tartiib ah u soo hagaagaya iyada oo la horumarinayo tikniyoolajiyada wax soo saarka. Maqaalkani wuxuu si faahfaahsan u sharxi doonaa dharka kahortagga caafimaadka 4-ta soo socota. Kordhinta Waxqabadka Baaritaanka Qaabka imtixaanka, booska muunad ururinta iyo kala soocida waxqabadka carqaladeynta ee dharka ayaa lagu muujiyey Jadwalka 1. Fiiri shaxda b ...
Sidee loo isticmaalaa dharka difaaca si sax ah? Isticmaalka dharka kahortagga ayaa si dhow ula xidhiidha nolosheena iyo caafimaadkeenna, sidaa darteed waa lama huraan in la xusho dharka ilaalinta oo buuxiyo shuruudaha tayada. Waqtiga xaadirka ah, magacyada ugu caansan ee caan ah waa Dupont of the United States, the United States Lakeland, 3M, Sperian, iyo wixii la mid ah. Ka dib marka aad hesho dharka ilaalinta, isticmaalka saxda ah ayaa waliba ka sii muhiimsan. Muuqaalka Loogu Baahan Yahay Naqshadeynta No.1 Dharka ilaalinta ahi waa inuu ahaadaa mid qallalan, nadiif ah oo ka madhan ...
Tilmaamaha ： 1. Dharka 'meltblown' wuxuu u adeegsadaa polypropylene sida sheyga ugu weyn ee ceyriinka ah, iyo dhexroorka fiber wuxuu gaari karaa 0.5-10 micron. Dharka 'meltblown' wuxuu leeyahay isku-hawo wanaagsan oo hawada ah waana maaskaro maaddada wanaagsan. 2. Waxaa laga sameeyay iskumar badan, kuwa aan xasaasiyad lahayn, waxyaabo aan dhiirin. 3. Ku hagaaji xargaha faashadda iyo barkinta leh xumbo xumbo leh si ay ula jaan qaadaan muuqaallada wejiga kala duwan oo leh silsilad raaxo leh. 4. Maaskaro la tuuri karo, fayadhowr iyo ku habboon in la isticmaalo. Codsi: 1. Codsi: adeegso dhismo ...
Astaamaha ： 1. Xirmashada buundada sanka oo balaaran oo aan muuqan, oo si xor ah u qaabeeysan si ay ugu haboonaato qaabab biriijyo sanka kala duwan, badbaado badbaado iyo taam buuxa; 2. Hawo-qaadashada sareeya ee neefsiga: Dusha sare waxaa ku daboolan daloolo hawo leh, oo raaxo leh oo neefsan kara. Neefsashada si tartiib ah ayaa sidoo kale leh af ballaaran oo hawo nadiif ah oo sifeysan oo lagu qanco; 3. Websaydhka jilicsan ee laastikada ah wuxuu dammaanad qaadayaa cimri dherer iyo cimri dherer isagoo tixgalinaya raaxada xidhashada; 4. Dharka 'meltblown' wuxuu u adeegsadaa polypropylene sida ma ...
Tilmaamaha ： 1. Dharka 'meltblown' wuxuu u adeegsadaa polypropylene sida sheyga ugu weyn ee ceyriinka ah, iyo dhexroorka fiber wuxuu gaari karaa 0.5-10 micron. Dharka 'meltblown' wuxuu leeyahay isku-hawo wanaagsan oo hawada ah waana maaskaro maaddada wanaagsan. 2. Waxaa laga sameeyay iskumar badan, kuwa aan xasaasiyad lahayn, waxyaabo aan dhiirin. 3. Ku hagaaji xargaha faashadda iyo barkinta leh xumbo xumbo leh si ay ula jaan qaadaan muuqaallada wejiga kala duwan oo leh silsilad raaxo leh. 4. Maaskaro la tuuri karo, fayadhowr iyo ku habboon in la isticmaalo. Codsi: 1. Codsi: adeegsiga dhismaha, m ...
Tilmaamaha ： 1. Ka samaysan alaab tayo sare leh, badbaado leh, jilicsan oo raaxo leh. 2. 95% shaandhaynta, waxay ku siinayaan difaac anti-bakteeriyada iyo ka hortagga boodhka. 3. Ka ilaali waxyaabaha hawadu ka kooban tahay iyo wasakhaynta hawada. 4. Xargaha dabacsan iyo sanka la isku hagaajin karo ee qaababka iyo cabbir kala duwan ee wejiga. Codsiga: 1. Codsi: adeegsiga dhismaha, macdanta, dhar-ka-gooshka, dawaynta shiidi. 2. Codsiyada: nolol maalmeedka, warshad warshad, SPA-yada, isbitaalada, rugaha caafimaad, iskuulka, meelaha shaqada, iwm. 3. Kahortaga ...
Tilmaamaha ： 1. Isticmaalka maalinlaha ah iyo nashaadyada bannaanka. 2. Gudbinta fayraska anti 3. Gudbinta dhibicda dilaaca 4. wasakheynta anti 5. Codsiga Kahortagga Dust: 1. Codsi: adeegsiga dhismaha, macdanta, dharka, ciida. 2. Codsiyada: nolol maalmeedka, warshadaha warshad, SPA-yada, isbitaalada, rugaha caafimaad, iskuulka, meelaha shaqada, iwm gudaha socodka ...